बैंकले ५ घण्टा अर्बपति बनाइदिएपछि…. | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार बैंकले ५ घण्टा अर्बपति बनाइदिएपछि….
बैंकले ५ घण्टा अर्बपति बनाइदिएपछि….
२०७६, १८ बैशाख बुधबार १७:१५
डा सन्तोष नेपालले मंगलबार नबिल बैंकको आफ्नो खाता हेरे । नबिल बैंकले आफ्नो खाताबाट ऋण लिएको रकम काट्यो कि काटेन भनेर हेर्दा उनी झस्किए । कारण उनको खातामा २३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । त्यो बेला ४ बजेको थियो । नेपालको खातामा कसैले पैसा जम्मा गरेर २३ अर्ब ७५ करोड आएको थिएन । न उनको खातामा विदेशबाट पैसा आएको थियो । नबिल बैंकको सिस्टममा भएको खराबीको कारण उनको खातामा २३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको देखिएको थियो ।
खातामा २३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ देखिएपछि उनले बैंकमा फोन गरे । उनले बैंकका कर्मचारीलाई भने,‘मलाई बैंकको अर्ब पैसा चाहिदैन,मेरो खातामा भएको केही हजार फिर्ता देउ।’ नेपालले नबिलका कर्मचारीलाई भन्दा कर्मचारीको जवाफ भने रोचक थियो । कर्मचारीले नेपाललाई तपाईको खातामा विदेशबाट पैसा आएको होला भन्ने जवाफ फर्काए ।
त्यसपछि बैंकमा उनको डिजिटल विभागका प्रमुख सनत पौडेलसँग सम्पर्क भयो । बेलुका ८ बजे पौडेललाई घटनाको जानकारी गराएपछि उनी समस्या समाधानमा लागे । पौडेलले नेपाललाई सिस्टममा भएको खराबीको कारण खातामा २३ अर्ब देखिएको बताए । ९ बजे बल्ल नबिल बैंकलाई २३ अर्ब फिर्ता गर्न नेपाल सफल भए । अर्थात नबिलको सिस्टमले काम गर्यो । ‘२३ अर्ब नबिललाई फिर्ता गरेर आफ्नो खातामा भएको हजार रुपैयाँ फिर्ता आएपछि बल्ल निद्रा लाग्यो।’ clickmandu.com
Previous articleमजदुर दिवसकै दिन माटोको ढिस्कोले पुरिएर मजदुरको मृत्यु
Next articleदलित भन्दै प्रधानध्यापकलाई कुटपिट गर्नेलाई कारवाहीको माग (प्रेस विज्ञप्ती)